“Dhacdooyinka Innagu Hareeraysani waxay innaggu Waajibinaysaa inaynu Meel u wada jeedsano” | Somaliland.Org
“Dhacdooyinka Innagu Hareeraysani waxay innaggu Waajibinaysaa inaynu Meel u wada jeedsano”
January 22, 2013	“Somaliland waa Qaran ka da’ weyn Soomaaliya Taariikh ahaan”
Khudbaddii Guddoomiye Cirro oo Dhamaystiran
Hargeysa (Somaliland.Org)-Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Somaliland, ahna Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), ayaa sheegay in duruufaha siyaasadeed eek u hareeraysan Somaliland ay waajib ka dhigayso inay ummadda Somaliland meel u wada jeedsato.
Guddoomiyuhu waxa kale oo uu ku dooday in Somaliland ay tahay qaran madax banana oo ka da’a weyn Soomaaliya marka loo eego taariikhdii xornimadda ay kala qaateen.
Mudane C/Raxmaan Cirro waxa uu sidaasi ku sheegay khudbad dheer oo uu ka jeediyay xafladii ay ku soo dhawaynayeen urur siyaasadeedkii UMMADDA oo maanta si rasmi ah ula midoobay. Khudbadaasina waxay iyadoo dhamaystiran u dhignayd sidan:-
Salaadiinta, cuqaasha, madaxada axsaabta iyo ururada siyaasadda ee JSL, mudanyaasha baaralamaanka iyo golaha deegaanka JSL, culimada, ganacsatada, haweenka iyo dhallinyarada, madaxda xisbiga WADDANI , saxaafadda iyo marti sharafta dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka: Salaamu calaykum wa raxmatulaahi wa barakaatuhu.
2. Soo dhaweyn
• Maanta waxay ii tahay maalin farxadeed. Waxaan ku faraxsanahay midowga Xisbiga WADDANI iyo Urur siyaasadeedka UMADDA. Waxaan ilaahay uga baryayaa inuu barakeeyo midowgaas, oo uu noqda mid dalka iyo dadkaba khayr u soo kordhiya. Xisbiga WADDANI waxa uu qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhaweynayaa Hogaankii, madaxdii iyo taagerayaashii ururka UMADDA . Midwogu waa mid heer kasta ah, heer qaran, heer gobol , heer degmo iyo laamaha dibedda.
Xisbiga iyo Ururku waxay ku heshiiyeen saami qayb ay qanceen, Md Qaasim Sheekh Ibraahim Tubeec, Guddoomiye Ku Xigeenkii 1aad ee UMADDA waxa uu ka mid noqon doonaa Gudoomiye ku xigeenada WADDANI, xubno ka mid ah madaxda kale ee UMADDA waxay xubno ka noqon doonaan Gole dhexe iyo Fulinta WADDANI. Gobolada, Degmooyinka iyo Laamaha dibedda waa la mideynayaa. Malaha waxa is weydiinaysaan Dr Maxamed Cabdi Gaboose muxuu noqonayaa? Dr Maxamed Waxa uu noqnayaa ODAYGA iyo MUS DAMBEEDKA Xisbiga.
WADDANI, kiisii hore iyo kuwa dambe, waxaan heshiis ku nahay inaan noqono mucaarad wax dhisaya, sas badan yaan laga qaadin. Xukuumadda Somaliland wixii dhaliil ay leedahay loo qarin mayo, wixii wanaag iyo horumar ah xisbigu wuu ku taagerayaa.
• Maanta laba urur ma kala nihin, maantaba Waddaniyiin baan wada nahay , is doortay oo is ogol , isku hadaf iyo ujeeddo ah, ujeedadaas oo ah in loo wada guntado sidii wadankeennu u heli lahaa amni, una gaadhi lahaa horumar siyaasadeed, dhaqaale, aqooneed iyo cadaalad una heli lahaa aqoonsi caalami ah. Himilada Xisbigu waa inuu hogaanka dalka qabto.
3. Arrimaha Gudaha
• Walaalayaal maanta waddankeennu wuxuu marayaa marxalado ay dhacayaan isbedelo iyo dhacdooyin waaweyn oo inagu hareeraysan, taasina waxay innagu waajibinaysaa in aad meel uga soo wada jeesano oo midayno fikirkeenna iyo dadaalkeenna. Tallaabadan aannu maanta qaadnayna ee midowga WADDANI iyo UMADDA waxay salka ku haysaa arrintaas.
• Walaalayaal, maantana waddo kale ma jirto oo aan ahayn in aan danta dalkeenna, dadkeenna iyo diinteenna meel uga soo wada jeedsanno, gacmaha isqabsanno innaga oo isu dhan, innaga oo isu dulqaadanayna, innaga oo isa saxayna, innaga oo iswadanna iyo innaga oo mideysan.
4. Somaliland iyo Somalia
Gumeystihii Africa Gumeystay dadka af Somaliga ku hadla waxa uu u qaybiyey shan qaybood. Jabuuti, Somaliland, Kililka 5aad, Somalia, iyo NFD. Xidigta 5 geeska ah ee calanka Somalia taas bay u taagan tahay.
Somaliland shanta Somaaliyeed iyada oo xoriyad ugu hoor qaadatay 26th June 1960. Waa qaran ka da’ weyn Somalia. Madaxweynaha Somalia Md Xasan Sheikh oo aan dhegaystay khudbad uu ka jeediyey Minnesota, USA waxa uu xusay in Manadate xukuumadiisu tahay in dalka Federal laga dhigo.
Waxa kale oo ka mid ahayd khudbadiisa inta dawlad goboleed ee Somalia yeelanayso waxa goynaya baarlamaanka Somalia.
Waxa kale oo ku jirtay khudbadiisa ( Youtube ka ayaad ka heli kartaan) inuu yahay Madaxweynaha dadka Somaaliyeed oo dhan.
Waxa laga yaabaa in haddi taariikhdu madmadow kaa galo oo kaa qaldanto, in xisaabtu kaa qaldanto, ka dibna xaalku noqdo CABDOO QALAD XISAAB.
MADAXWEYNAYGA, MADAXWEYNAHA Somaliland waa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo, Ka Jabuutina waa Madaxweyne Geelle, ka kililka 5aad waa Cabdi Cumar, NFD waa gobol ka mid ah Kenya. Adiga waxaan kuu aqoon sanahay oo kugu ixtiraamayaa inaad tahay Madaxweynaha Somalia. Khubadda Madaxweyne xasan ee Mennosota iyo khubadiisi marka loo doortay Madaxweynaha faraq weyn baa u dhaxeeya.
Somaliland kulama heshiis aha Somalia inay la dhisato nidaam Federaal ah. Gooni isutaaga Somaliland waa go,aan shacbi.
Baarlamaanka Somalia isagaa xor u ah inta dawlad goboleed ee uu Somalia ka dhigayo. Arrin khuseysa iyo arrin u taal Somaliland midna maaha.
Madaxweynaha waxa ka muuqda dadaal badan waxanse kula talin lahaa inaanu ku dhicin dabin ay hore ugu dhaceen Madaxweynayaashii ka horeeyey ee Somalia oo ah inay iskaga qaldanto gobolada Somalia iyo Somaliland.
Dastuurka Somalia waxa uu gaar u yahay Somalia. Somaliland waxay leedahay dastuur shacbigu afti ku ansixiyey iyo baarlamaan.
Wadahadalada Somalia iyo Somaliland waan soo dhaweynaynaa, waxaanse uga dhigaynaa Madaxda Somalia inaanay ka hor dhicin gunaanadka wada hadalka, laguna koobnaado in la wada hadlo keliya, qolo kastaana ajendaheeda miiska la timaado.
Xisbiga WADDANI , annaga oo hore u sheegnay marmar badan, himilooyinka Xisbiga WADDANI waxa ka mid ah inaan noqono qaran madax-banaan oo sharaf iyo karaamo ku naalooda, shacbigiisuna xor ka yahay jahli, faqri iyo qabyaalad kala qoqobta, qaran ku qotoma nidaam dimuqraadi ah (talo-wadaag) oo waafaqsan diinta Islaamka, dhaqanka iyo hiddaha aynu leenahay; qaran midaysan oo ku dhisan wadaniyad, sinnaan iyo cadaalad”.
Previous Post“Waxaanu Sanadkii hore Talaalay Xoolo dhan 7 Milyan,halka aanu dawaynay hal Milyan oo kale”Next PostWasiirka Daakhliga Oo Ka Hadlay Hadallo Hore U Ydihi Oo Dareen Dhaliyey Beesha	Blog